Games | Net Guide
Home Infotainment Games
MechWarrior5: Mercenaries (PC)
author 1 - October 29, 2019
Super Dragon Ball Heroes: World Mission (PC)
Games author 1 - November 14, 2019
ယခုတစ်ပတ်အတွက် ထွက်ရှိလာတဲ့ အခွေကတော့ ကားဂိမ်မာတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ထရပ်ကားဂိမ်း FIA European Truck Racing Championship ဆိုတဲ့ အခွေလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခွေလေးကို ရေးဆွဲဖန်တီးပေးထားတဲ့ Developer ကတော့ N-RACING အုပ်စုဖြစ်ပြီး ဖြန့်ချိပေးတဲ့ Publisher ကတော့ Bigben Interactive ကုမ္ပဏီပါ။ ဒီဂိမ်းလေးမှာ နောက်ခံအနေနဲ့ အမေရိကန်၊ ဂျပန်...
Cities Skylines: Modern City Center (PC)
Games author2- November 19, 2019
စာရေးသူ: GT (Excellent) ယခုတစ်ပတ်မှာထွက်ရှိလာတဲ့ဂိမ်းကတော့ Cities Skylines: Modern City Center ဆိုတဲ့အခွေလေးပါ။ ဒီဂိမ်းလေးကတော့ သာမန်အပစ်အခတ်၊ အထိုးအခုတ်ဂိမ်းတွေကို မူးနောက်ငြီးငွေ့တတ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့အကြိုက်တွေ့စေမယ့် City-building, Construction and Management Simulation ဂိမ်းအမျိုးအစားလေးပါ။ နာမည်ကျော် Cities: Skylines စီးရီးအတွက် (9)ခုမြောက် Expansion Pack ဖြစ်ပြီး...
Games author 1 - October 22, 2019
CSR Racing ဟာ အမိုက်စား graphics နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ gameplay ကို ကစားရမယ့် ပြိုင်ကားဂိမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ McLaren, Bugatti, Aston Martin, Hennessey နဲ့ Koenigsegg အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး ကားထုတ်လုပ်ရေးတွေရဲ့ လိုင်စင်ရကား အစီး 100 ကျော်ကိုသုံးပြီး ကားမောင်းပြိုင်ရမှာပါ။ မတူညီတဲ့ အဆင့်...
Games author 1 - October 8, 2019
Garena Free Fire ကတော့ တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းတွေကို နှစ်သက်သူတွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက် multiplayer shooter ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့ အဓိကဦးတည်ချက်က ပြိုင်ဘက်ကစားသမားအားလုံးကိုရှင်းပြီး ကျွန်းပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း အသက်ရှင်ကျန်တဲ့အထိ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသူအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စမှတ်ကို လေထီးနဲ့ခုန်ဆင်းကာ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ဘေးကင်းဇုန်မှာ တတ်နိုင်သမျှ ကြာကြာနေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။...
Games author2- October 22, 2019
စာရေးသူ: GT (Excellent) ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ (19)ရာစုနှောင်းပိုင်းကာလ အနောက်အမေရိက ကောင်းဘွိုင်စတိုင်ဆော့ ကစားရ မယ့် Action ဂိမ်းသစ် Red Dead Redemption2ဆိုတဲ့အခွေလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒီအခွေလေးဟာ နာမည်ကျော် Red Dead စီးရီးရဲ့ တတိယမြောက်ဖန်တီးမှုဖြစ်ပြီး (2010)ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Red Dead Redemption ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။...
Into the Dead2: Zombie Survival
Games author2- December 10, 2019
Into the Dead2ဟာ zombie တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းနဲ့ endless runner ပုံစံပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အလွန်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူမှု ပေါင်းသန်း 70 ကျော်သွားခဲ့တဲ့ zombie အက်ရှင်ဂိမ်း Into the Dead ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုကိုကယ်တင်ဖို့အတွက် မကောင်းဆိုးဝါး zombie တွေပြည့်နေတဲ့နယ်မြေထဲဝင်ရောက်ပြီး အသက်ရှင်သန်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားရမယ့်ဂိမ်းပုံစံကို...
Games author 1 - December 3, 2019
Aion : Legions of War ဟာ မဟာဗျူဟာကျကျ ကစားရတဲ့ RPG ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး mobile device တွေပေါ်မှာ အလွန်မိုက်တဲ့ gameplay နဲ့ console-quality graphcis ပိုင်းကို တွေ့ကြုံခံစားရမယ့်ဂိမ်းပါ။ ကြီးမားတဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ကာ စစ်ကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ AION စကြာပဠာအတွင်းက လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို...
The Sims4: Discover University (PC)
Games author 1 - November 26, 2019
ဒီတစ်ပတ်မှာ ထွက်ရှိလာတာကတော့ နာမည်ကျော်ဆိုရှယ်ဂိမ်းစီးရီး The Sims4အတွက် Expansion Pack ဖြစ်တဲ့ Discover University ပါ။ ဘဝတစ်ခုကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖန်တီးကိုင်တွယ်ကစားနိုင်တဲ့ The Sims4ကို 2014 ကတည်းက ပွဲထုတ်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခု Discover University ကတော့ 8 ခွေမြောက်...
Games author2- January 11, 2020
Madden NFL Mobile Football ဟာ Super Bowl လို့သိကြတဲ့ အမေရိကန်အမျိုးသား Football လိဂ် NFL ကို အခြေခံထားတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် NFL အသင်းကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းပြီး ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကာ အသင်းကို Super Bowl ဗိုလ်လုပွဲထိတက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့အသင်းကို လက်ရှိ NFLစတားတွေနဲ့ ဂန္တဝင်...
Games author2- December 19, 2019
စာရေးသူ: GT (Excellent) ဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဂိမ်းကတော့ ဘောလုံးမန်နေဂျာပရိတ်သတ်တွေအတွက် Football Manager 2020 ပါ။ ဒီဂိမ်းလေးကို ရေးဆွဲဖန်တီးပေးထားတဲ့ Developer ကတော့ Sports Interactive ဖြစ်ပြီး ဖြန့်ချိပေးထားတဲ့ Publisher: ကတော့ နာမည်ကျော် SEGA ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ Android, Google Stadia, iOS, macOS, Microsoft Windows,...